Posted on October 14, 2017 October 19, 2017 Amandla High LED-Flood Khanyisa Abakhiqizi
LED Umhubhe Lights & Lightings Underground @ TACHYON High Power LED Lights Abakhiqizi
LED Umhubhe Lights ithathwa njengokuhlola yezingxenye ezibaluleke kakhulu ngaphakathi Wegazi. Impumelelo ngokwanele & ukukhanya ezifanele olunikezwa LED Umhubhe Lights zabanye kungakuqinisa ngempela unciphise okuvela izingozi zezimoto. TACHYON Lights ngokukhethekile amaphrojekthi athile okuhlobene kwezibani LED for imihubhe inikeza izixazululo Umhubhe ahlukahlukene ukukhanyisa ukuba izidingo ezahlukene kanye nezinselelo. It esanda waqinisekisa ezingxenyeni eziningi zomhlaba ukuthi LED Umhubhe izibani kukhona ikhambi ephelele imihubhe underpasses kanye eyaziwa ngokuthi izindinyana amnyama liyidlive ngenxa ke ukugqama emangalisayo, ukukhanyisa ukufana & kwesikhathi sokuphila, okungukufa Izinzuzo LED Umhubhe Lights phezu Metal Halide nezibani ezivamile HID Izibani.
Amandla Ukulondoloza Impahla ye LED Umhubhe Lights
LED Umhubhe Lights manje kunamaqiniso Imigudu ukukhanya. izici yazo ihlanganisa ukuphila isikhathi eside besebenza, ukuzinza kakhulu futhi high ukukhanyisa kahle. I ukuthuthukiswa ngokushesha ivolumu traffic emhlabeni wonke kuye kwaholela anda Umhubhe funa. Isidingo Umhubhe izibani LED ngqo okwandisa ngenxa ukuphepha kwagezi. okwamanje, LED uya okusetshenziselwa ukukhanyisa amanethiwekhi emgwaqeni womphakathi kubandakanya Imigudu, esikhundleni ubudala umfutho high osenyameni (HID) ukukhanyisa izinhlelo. LED izibani uhlelo. Namuhla liye kungase kutholakale ukuthi ephelele Umhubhe ukukhanya lwemidlalo ngokuba ukudlula ngaphansi. imishini MH futhi HPS ukukhanyisa kunikeza inhlanganisela elikhangayo ihlolwe isakhiwo mechanical, eziphansi kanye okusezingeni eliphezulu ukukhanya umfutho ukuze emhubheni ukukhanyisa uhlelo. Uchungechunge MH futhi HPS ukukhanyisa ngokuvamile sibonisa ngesivinini esiphezulu 400 W ukukhanyisa zalapho ukuthi ahlangabezane nezidingo Umhubhe ukukhanyisa. Nge TACHYON Lights, 130W – 140LED W angenza kahle lo msebenzi. Ngakho-ke ungakwazi ukubona ukuthi amandla nezindleko lehla 1/3 lenani yayo yasekuqaleni futhi ngaleyo ndlela wonge ugesi wakho Bill.
Izinzuzo LED Umhubhe Lights
Ngezinye TACHYON Lights, umsebenzi wethu oyinhloko uwukwenza ukukhombisa & ukukhuthaza ezinye izici omuhle kakhulu ukukhanyisa LED, olusekela yokuthi LED endleleni ukukhanya zalapho kukhona kwayizuzisa kuzo zombili esifushane kanye nasesikhathini eside uma kuziwa ukukhanyisa. Impilo isilinganiso ephezulu LED ukukhanyisa balinganiselwa ku 10 iminyaka uma usebenza le LED Umhubhe Lights 24/7. Ngaphezu kwalokho, ke esebenza kahle kakhulu, okusho ukuthi igebe phakathi okukhipha amandla okokufaka Amandla impela, okusho izindleko eziphansi phakathi nesikhathi sokuphila wokusebenza. Nakuba ingahluka umenzi nomkhiqizi, LED Umhubhe ukukhanya sinezici efanayo. Okokuqala nje, it has a ukusebenza kahle amandla 95% noma ngaphezulu. Ngamanye amazwi, lisebenzisa 95% amandla esingaphansi kunokukhanya okuvamile ezifana MH & HID. Okwesibili, esaphila imayelana 80,000 ukuze 100,000 amahora angu-L70, okusho ukukhanya zizogcineka okungenani 70% sosuku nanye yayo ukubaluleka ngemva 80,000 ukuze 100,000 amahora. Ekugcineni, i-engeli ugongolo 90 ° I-eksisi eqonde ngqo phezulu futhi 100 ° I-eksisi evundla kabili ukusatshalaliswa kwenziwa kusetshenziswa ugodo noma ijika iphethini enikeza okusezingeni eliphezulu ukukhanyisa ukufana, voltage okokufaka kudinga AC 90-265V okuyinto efanelekayo ukufakwa emhlabeni wonke. LED Umhubhe ukukhanyisa yethu luhambisana eyindida ukulawula ukukhanya kanye.
Anti-ukuxhopha LED Umhubhe Lighting
Sikhanyisiwe usebenzisa eyinkimbinkimbi ukumodeliswa optical, iyunifomu okuqhubekayo ukukhanya nokujikijela design, le Umhubhe izibani LED lens kudala olinganiselayo futhi anti-glare ukukhanyisa amaphethini emhubheni ngaphandle kukuphazamise ukukhanya noma engamele. Kusukela afanayo encane LED siqukethe ngabanye module chips futhi siqukethe ephumelelayo kakhulu umthombo wokukhanya kanye ngokwezifiso ugongolo iphethini, kuba iyunifomu wokuqala kungenziwa eyenziwe e DIALux ngaphambi kokuqala amaphrojekthi LED Umhubhe Lights. By sisebenzisa Imininingwane yangaphakathi kuveza isimiso, lens LED ngamunye kungaba ebanzi, okuyilona elisebenzayo futhi ezisebenzayo ewumngcingo ugongolo engeli.
Kungani LED kodwa kafihlakalanga?
LED yethu kunezinzuzo ezimbili ezinkulu njengoba uhlelo Umhubhe ukukhanyisa phezu HID. Okokuqala, ikhwalithi ukukhanya, kanti okwesibili, umphumela ukunciphisa ivolumu traffic. LED emitters ukukhanya kakhulu ukukhanyisa ukukhanya ngoba ukunikeza eside ibanga okukhanyisa. TACHYON sika LED Umhubhe Lights, ngokungafani HID bendabuko, inikeza ukukhanyisa iyunifomu kulo lonke Umhubhe. Ngaphezu kwalokho, izibani zethu LED, ngokungafani MH futhi HPS ukukhanyisa izinhlelo, behluleka neze futhi isikhathi sokuphila kuyinto isikhathi eside. Ngenxa yalokho, amathuba ukuthi ezingxenyeni ezihlukahlukene Umhubhe uzoyeka ugesi wawuphela kuyoba eliphansi kakhulu. Ngaphandle, iqoqo LED Umhubhe Lights ngamunye axhunyiwe ngokulinganisa; Ngakho-ke, eyodwa noma ezimbalwa iyavala ngeke kuthinte abasele. It unikeza yesondlo esikahle futhi ongaphakeme yesondlo izindleko, futhi ukunciphisa okuyisidina kabusha ukukhanyisa imisebenzi yasekhaya, ukunciphisa kwenzekani uyiphindaphinda ukwandisa ukuphepha nokuphepha yezimpilo zethu.
Material yethu LED Umhubhe Lights
Izinsolo ekusetshenzisweni LED ukukhanyisa imigudu ziye zasekelwa izakhiwo ezimbili eziyinhloko, okungukuthi izinga ukukhanya izindleko isekhondi kanye nokugcinwa. Okuthuthukisiwe ukukhanyisa izinga LED Umhubhe Lights okuye kungase kutholakale usizo kakhulu abashayeli nabahamba ngezinyawo kanye. Ngakho-ke, kwamanye amadolobha exubile, thina banquma ukutshala imali LED Umhubhe ukukhanyisa ukuthuthukisa inethiwekhi zokuthutha futhi banquma ukulisebenzisa Umhubhe endaweni yomphakathi ikhange nakakhulu futhi kube evikelekile kubasebenzisi bomgwaqo. Eziningi zalezi Umhubhe izibani LED zakhiwa usebenzisa izinto imvelo nobungane enokwethenjelwa kakhulu, ezifana casings zakhiwe Aluminium ingxubevange & Insimbi engagqwali. lens esobala eyenziwe omnene ingilazi iphinde ivimbele uthuli namanzi ekonakaleni kwesibani. Ukwakheka kwazo ngokwama-kwenza kube yinto engenzeka ukuthi sisebenzisane kahle ezinomswakama kanye okusezingeni eliphezulu lokushisa ezindaweni. Namuhla, kunezinhlobo ezintathu oyinhloko Umhubhe izibani LED elisetshenziswa emhlabeni.
Amaphuzu ngokukhethekile Phawula at LED Umhubhe Khanyisa
amamaterial, amasu kanye imithombo ukukhanya zamukelwa womshini LED Umhubhe izibani. Njengoba Umhubhe ukukhanyisa akafani ukukhanyisa emgwaqweni evamile, kubalulekile ngoba abakhiqizi ukuqaphela izimo ukuthi abampofu kwemvelo ezifana vibration, umsindo, imoto qeda igesi futhi kungase kuthinte Umhubhe ukukhanyisa. Unalokhu engqondweni, Abenzi Umhubhe izibani kudingeka isikhala esengeziwe lokuthi acebe ubungcitshi ukunikela okungcono Umhubhe ukukhanyisa uhlelo ukuthi kudala indawo ephephile abahamba ngezinyawo, Abahamba, kanye nabashayeli.
Nokho, ngaphambi kokunquma, sincoma ukuthi uxhumane ne main LED Umhubhe ukukhanya umenzi. Esikhathini kokubonisana, ukudala umklamo esebenzisa inombolo abambalwa kwezibani kwemisebenzi yoMnyango ukukhanyisa umphumela kuqinisekisa ukuthi iphrojekthi kuyophumelela. Futhi kuwukuhlakanipha ukukhumbula ukuthi umklamo Umhubhe kuthinta ukukhanyisa kunesidingo njengoba zonke Imigudu akuzona ngqo. izibani Umhubhe Special kungabuye yakhelwe ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende. Indawo akuyona ngempela inkinga ngoba abakhiqizi kakhulu kungaba ukuletha emazweni amaningi emhlabeni.
Uma iphrojekthi yakho ezidinga High Quality LED Umhubhe Lights, sicela ukhululeke uphonsa us umlayezo esebenzisa ifomu elingezansi, noma info@tachyonlight.com. Uma ungathanda ukubheka umkhiqizo sokunqophisa LED Umhubhe Lights, ungathola ukufinyelela leli khasi: LED Umhubhe Lighting, Lights Underground & Subway Lighting @ Delivery Emhlabeni wonke.
Umkhiqizo Uphenyo ku Quality LED Umhubhe Lighting